Sh.Shariif & Cabdiwali Gaas oo si iskhilaafsan uga hadley soo gelista Kenya… – SBC
Sh.Shariif & Cabdiwali Gaas oo si iskhilaafsan uga hadley soo gelista Kenya…
Posted by editor on Aktoober 25, 2011 Comments
Hadalo isburinaya oo khilaaf ka muuqdo ayaa ka soo yeeray Madaxweynaha & Ra’isalwasaaraha dawlada KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed & Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas), kaasi oo ku aadan soo galitaanka ciidamada Kenya ee gudaha Soomaaliya.
Hadal uu saxaafada shaley siiyey madaxweyne Shariif Sheekh ayuu wuxuu si kulul uga hadley gulufka colaadeed ee Kenya ku soo gashay gudaha Soomaaliya ee ay ku sheegtey inay ku baacsanayso xarakada Al-Shabaab, isagoo ku tilmaamay talaabadaasi mid aanay raali ka aheyn shacabka iyo dawlada Soomaaliya, waxaana uu sheegay inaan lagala tashan arinkaasi.
Hadaba wareysi kale oo uu bixiyey Ra’isalwasaare Cabdiwali Maxamed Cali Gaas uuna siiyey wargeyska the Star ee ka soo baxa magaalada Toronto ee dalka Canada ayuu wuxuu ku muujiyey in uu si weyn u ayidsan yahay oo uu taageerayo duulaanka Kenya ee Soomaaliya ku soo gashay oo ay kula dagaalamayso Shabaabka.
Wareysigan oo muuqaal ah ayuu wuxuu ku sheegay in Kenya lagu qasbay in ay soo gasho Soomaaliya ka dib markii sida Ra’isalwasaaruhu sheegay Shabaabku bilaabeen inay gudaha Kenya ka soo qafaashaan qaarna dilaan dadka dalxiisayaasha ah, isagoo ku tilmaamay dalxiisku in uu yahay isha dhaqaale ee ugu balaaran dalka Kenya.
“Ma garanayo sida aad ula socoto dhamaan hoteeladii iyo goobihii dalxiiska ee Kenya sida Mombasa iyo Lamu way haawanayaan, waxaana la kansaley reservation-kii (laga baaqsadey imaanshihii) isla markaana laga kala cararay goobahaasi, 90% hada way haawanayaan hoteeladii, taasina waxya saameynaysaa dhaqaalaha Kenya, waxaa kaloo jirta Kenya waxay martigalisaa 500 kun (Nus malyuun) qaxooti Soomaali ah, kuwaasi oo ay Al-Shabaab ka cayriyeen deeganadoodii” ayuu yiri Ra’isalwasaare Gaas oo qiil badan u sameeyey soo galitaanka Kenye ee xuduuda Soomaaliya.
Cabdiwali Gaas ayaa sheegay inaanu wax ixsaan ah ama dhag jalaq u siineyn cid kasta oo ka soo horjeeda in Kenya soo gasho Soomaaliya, ayna la dagaalanto Al-Shabaab, waxaana intaasi uu ku darey in Kenya & Soomaaliya ay ka wada shaqeynayaan la dagaalanka Al-Shabaab.
Link Video-ga hoose ka dhageyso wareysiga Ra’isalwasaaraha lala yeeshay.